PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-09-12 - Uthi akayi ndawo un­ob­hala wa­maLuthela
Uthi akayi ndawo un­ob­hala wa­maLuthela
Eyethu Baywatch - 2018-09-12 - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu
USHAYA phansi ngonyawo un­ob­hala we­bandla lamaLuthela uM­fun­disi Themba Khathi ukuthi an­gase aphume ekomkhulu lalelibandla eliseM­phu­mulo.
Lokhu ku­lan­dela ukuthi intsha yalelibandla, iham­bise in­cwadi ebinxusa ngayo ukuthi akhishwe kulesi sikhundla.
Engx­oxweni ekhethek­ile nephep­hand­aba, uMfu. Khathi uthe lokhu okushiwo yintsha yebandla akumthinti yena, ngoba okokuqala akathun­y­wanga yiyo, kodwa uthun­ywe yi­h­ho­visi eliphethe lelibandla ekomkhulu lalo eBonero Park.
Uthe isenzo sentsha eyay­i­ham­bele eM­phu­mulo siyafana nokuh­lasela ibandla, ngoba lokhu eyayik­wenza, kwakungekho em­theth­weni.
‘Isenzo sabo sakhom­bisa ukuthi kukhona abadala abayiseben­zisayo, njen­goba yonke im­ibango ekhona kulelibandla, in­abathize abay­ibasayo ukuze kufezeke iz­inhloso zabo.
‘Khona bandla kuyawup­haz­a­misa um­sebenzi esi­wen­zayo, ngoba ku­chitheka isikhathi kun­gafanele uma sesinaka iz­into ezin­ge­na­sidingo nezin­galiy­isi lelibandla pham­bili.
‘Uphinde waxway­isa labo okuthi uma kun­a­bantu abangaba­funi, bazithathele bona isin­qumo sokubax­osha, ngaphan­dle kokuthi bazise ikomkhulu ngez­in­qumo abazithathayo, njen­goba kuke kwen­zeka kuyena ex­oshwa uMb­hishobhi Buthelezi ngaphambi kokuthi abuyiselwe.
Uku­cacisile ukuthi em­pe­leni kuningi okusa­funa ukuthi ku­lungiswe kulelibandla, kuphinde futhi ku­lanyulwe nalez­impi ezin­gaphakathi, ezigcina zizale amaqembu an­aba­holi abathize, aba­funa ukuba se­man­dleni ngenkani.
Nakuba imisebenzi yonke yalelibandla iqhubeka kuh­langene nezinkonzo kodwa kuningi okusafanele ku­lungiswe njen­goba amanye amalungu alelibandla en­gath­okozile ngob­uholi obukhona obun­gondlovu kayiphik­isa kusukela emazin­geni aphansi kuze kuy­ofika kwaphezulu.
Defiant Lutheran Church Sec­re­tary re­fuses to leave of­fice